Ntuziaka agbataobi: Ihe 10 ị nwere ike ịmaghị gbasara Ogbe Ndịda LA
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ntuziaka agbataobi: Ihe 10 ị nwere ike ịmaghị gbasara Ogbe Ndịda LA
N'ime afọ ole na ole gara aga, echiche nke Ogbe Ndịda Los Angeles agbanweela nke ukwuu.
Site na nbata nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ mmanya, na ụlọ ahịa, ọtụtụ Angelenos na-agba ọsọ iji gaa na mpaghara DTLA na-eme nke ọma, ma olee otu ị ga-esi mara ebe ị ga-aga? Anyị gagharịrị n'ebe ahụ iji chọpụta ihe kwesịrị ịlele, ebe a bụ ihe iri ị nwere ike ịmaghị ogbe ndịda LA.
Enwere nka ọha karịa ka ị chere.
N'ikwu okwu nka ọha, Ogbe ndịda LA nwere ihe ncheta na ihe oyiyi ya karịa nke ọma nke na-eguzo dị ka mgbama maka ndị njem. Ihe mbụ ị na-ahụ mgbe ị banyere na Arts District bụ ihe osise ọha - yana na ọ dị ebe niile. Ogbe ndịda bụ ọmarịcha nka ọha sitere na nnukwu eserese dị n'akụkụ ụlọ ruo na obere ọrụ dị n'akụkụ windo, oche, na ọnụ ụzọ.
Isi ihe dị na DownTownLA
Enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie (nke efu) nke a ga-achọpụta n'okporo ụzọ awara awara.
A na-akpọ ya Grand Central Art Center, ọ dịkwa n'okporo ụzọ dị n'etiti Main na Spring Street na 2nd na 3rd Street. Mpaghara ahụ bụkwa ebe Shepard Fairey na Mark Dean Veca na-arụ ọrụ ma kpọọ ya "Alley-Oop" n'ihi nka.
Enwere ihe osise otu ụzọ ugogbe anya dị 140.
LA Mural bụ ugegbe abụọ kacha esere ese n'ụwa. Ọ buru ibu, ị nwere ike ịhụ ya site na kilomita site n'ebe dị anya… ma a na-ese ya n'akụkụ ụlọ, ọ bụghị naanị ihe osise dị n'ala! Artist Robert Vargas kere ya na 2008.
Ị nwere ike nweta otu ihe eji megharịa ọnụ yana iko kọfị gị na Urth Caffe.
Ebe ọ bụla ogbe ndịda nwere ihe ngosi nke jupụtara n'ọtụtụ pastries na desserts ị nwere ike ịzụta mgbe ị nụchara nri gị. Donuts, croissants, tarts, achịcha, kuki, brownies… ọ bụrụ na ị nwere ike iri ya, ha nwere ya ere!
Pixar hụrụ ogbe ndịda LA!
Ihe nkiri ahụ na-enye obi ụtọ bụ "Elu" ka edobere n'obodo a na-eche n'echiche nke nwere ọtụtụ myirịta na ogbe ndịda LA gụnyere nnukwu mgbidi dị n'èzí na mgbidi ụlọ, ebe obibi Victorian ghọrọ ụlọ, ụgbọ okporo ígwè na-ebu ndị mmadụ gburugburu obodo ... ọbụna ụlọ nwere elu ụlọ na-acha uhie uhie! Ọ bụ LA nwa amaala Pete Docter duziri ihe nkiri a, onye bi na Angelino Heights akụkọ ihe mere eme n'etiti ọtụtụ ụlọ akụkọ ihe mere eme ọ zụtara ezinụlọ ya mgbe o mechara "Monsters Inc.
Ogbe ndịda LA bụ ebe obibi tacos azụ.
N'etiti 1970s, entrepreneur Ralph Rubio webatara taco nke ụdị Baja a ma ama ugbu a na mpaghara San Diego, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya malitere ịbịaru ahịrị gburugburu ngọngọ. Na 1989, ọ mepere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Anaheim, na 1995, ọ bịara Los Angeles. Mgbe ebe mbụ Rubio dị n'ime obodo Los Angeles mepere na 9th na Hill streets na 1996, ọ ghọrọ ihe egwu-na ihe mmetụ omenala.
ego: Ogbe ndịda LA bụ mpaghara azụmahịa kacha arụ ọrụ na ọdịda anyanwụ United States, yana ogbe ndịda LA nwere ọnụ ụlọ nkwari akụ kacha elu na Southern California. Isi akụkọ ihe mere eme nke Downtown LA bụ ebe obibi nke ụlọ nkwari akụ karịa ọnụ ọgụgụ ọnụ ụlọ dị na San Diego's Hotel Circle, San Francisco's Union Square, ma ọ bụ Seattle's Pike Place Market.
Ogbe ndịda LA bụ ebe mbụ In-N-Out burger. N'afọ 1948, Harry na Esther Snyder jeere ndị ahịa mbụ ha ozi site na obere stool counter dị n'ụlọ nrụpụta Lily Tulip dị n'akụkụ Westlawn na La Brea Avenues.
Obere Tokyo abụghị akụkụ nke ogbe ndịda LA - n'agbanyeghị na ọ dị n'ebe dị anya site na Union Station na Financial District, Little Tokyo bụ obere agbata obi ya. Ọ bụ akụkụ nke Little Tokyo Services Center, Inc., ọgbakọ anaghị akwụ ụgwọ dị iche. Ebe omenala taa nke a maara dị ka Little Tokyo tọrọ ntọala na 1887 ka ọ bụrụ ogige maka ụmụ amaala Japan bụ ndị si Japan kwaga ma bụrụkwa ebe obibi na Japantown na-eme nke ọma. Na 1909, a kpọgharịrị obodo ahụ aha East Los Angeles, na 1931 a bịara mara ya dị ka Little Tokyo. Na 1942, na-esochi Internment nke ndị America America, kpọgharịrị obodo ahụ ọzọ ka a mara ya dị ka Boyle Heights.
Ụlọ ihe nkiri Disney bụ ebe obibi LA Philharmonic - otu n'ime ndị egwu egwu ama ama na ụwa, nke pụtara na ọ bụrụ na ị na-achọ ịhụ ụfọdụ ndị egwu A-List na-abịa n'obodo, nke a bụ otu n'ime ntụpọ ị kwesịrị ilekwasị anya.
Ụzọ 10 Freeway anaghị akwụsị ogbe ndịda - Ọ bụrụ na ị jikwaa n'ụzọ ụfọdụ na-atụfu ụzọ iri free ụzọ ị na-aga ogbe ndịda LA, ị nwere ike iburu Alameda St north ruo ebe ọ na-ejikọta na ise freeway ga-eweghachi gị azụ na ogbe ndịda.
Ụlọ Bradbury bụbu ebe a na-edebe ozu. Tupu Ndị na-arụzigharị ụlọ ahụ zọpụtara ụlọ akụkọ ihe mere eme ka a kwatuo ya, ọ rụrụ ọrụ dị ka ebe a na-edebe ozu maka ozu ndị na-echere njirimara steeti ma ọ bụ nyocha ozu ka ewepụrụ ya n'aka ndị uwe ojii.
Àkwà mmiri abụọ na-agafe Osimiri LA.
The Akwụkwọ akụkọ Los Angeles Downtown News na-akọ na àkwà mmiri First Street malitere laa azụ na 1913. A na-eji àkwà mmiri ahụ dị ka ọnụ ụzọ ụgbọ oloko ibu ibu ihe n'ụlọ nkwakọba ihe dị nso n'osimiri ahụ. Àkwà mmiri a ka na-arụ ọrụ taa ma jikọọ mpaghara Arts na obere Tokyo. Ewubere akwa nke abụọ, nke a maara dị ka àkwà mmiri Sixth Street, na 1926, na mmiri mmiri ndị Rom oge ochie mere ka ọ rụọ ọrụ ya.
Ọ dị nso na ọtụtụ obodo
LAX bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kacha nso na ọtụtụ mba (gụnyere Mexico) n'ụwa, na-eme ka ọ dị mfe ịga mba ọzọ na ọnụ ahịa ọnụ ala.
Ogbe ndịda LA nwere ọmarịcha ndụ abalị.
Ogbe ndịda LA nwere ndụ abalị kacha mma n'obodo. Ụlọ mmanya na klọb dị iche iche pụtara na ọ na-enwe ihe ị ga-ahọrọ na ya, ma ị nọ na-enwe mmasị maka mmemme ịgba egwu ma ọ bụ ebe dị jụụ iji soro ndị enyi gị nọrọ. Ogbe ndịda LA dịkwa mma maka ịṅụ mmanya ụbọchị.
Ọ bụghị ihe nzuzo na Ogbe Ndịda LA bụ ebe obibi nke ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma n'obodo ahụ. Kedu ebe ka mma maka ịṅụ mmanya ụbọchị? Ị nwere ike ịnụ ụtọ biya ma ọ bụ mmanya mpaghara na nri ehihie ma ọ bụ brunch wee gaa maka cocktails n'abalị.